New Technologies Are Coming to Solve Bitcoin's Scalability - Blockchain समाचार
एएमपी अब योजनाहरु र नयाँ प्रविधिहरू Bitcoin गरेको scalability समस्या सम्बोधन गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभएको एक असंख्य मिलती. अन्य विकल्पहरू SegWit समावेश, Schnorr हस्ताक्षर, र चट्याङ्ग नेटवर्क.
को एएमपी प्रोटोकल सञ्चालन हुनेछ Bitcoin चट्याङ्ग नेटवर्क. बिजुली नेटवर्क एक decentralized सिस्टम जो सहभागीहरू कार्यान्वयन गर्न trustless micropayment च्यानलहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ, बन्द-blockchain, एक वा धेरै भुक्तानी लेनदेन.
यी च्यानलहरू Bitcoin blockchain बाहिर निवास. लेनदेन च्यानलहरू बीच ठाउँ लिन. समाप्तिमा, यी लेनदेन प्रसारित छन्, एकल कारोबार रूपमा, को blockchain गर्न.
Segwit Bitcoin गरेको scalability सुधार र Bitcoin गरेको कारोबार शुल्क कम गर्न सक्छ कि अर्को महत्वपूर्ण Bitcoin अनुकूलक छ. SegWit पनि चट्याङ सञ्जालको कारोबार malleability सुधार गर्न मदत हुनेछ.
अगस्ट मा SegWit गरेको सक्रियता देखि 2016, विकासकर्ताहरूले झन् Bitcoin पर्स मा SegWit एकीकृत गरिएको छ, र धेरै आदानप्रदान पहिले नै SegWit लागू गर्दै. भर्खरै, फेब्रुअरी 5th मा, 2018, कोइनबेस अन्तिम परीक्षण चरण थालेका र Segwit अर्को केही हप्ता मा कोइनबेस ग्राहकहरु लागि उपलब्ध हुनेछ छ कि घोषणा.
एएमपी अर्को योजना छ कि, चट्याङ नेटवर्क संग, Bitcoin गरेको scalability मुद्दा समाधान गर्न मद्दत गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ. Bitcoin उत्साही र लगानीकर्ताले एएमपी सबै गुप्त stakeholders देखि समर्थन प्राप्त र सफलतापूर्वक अगाडि सार्न हुनेछ प्रत्याशा.
तपाईं कसरी लाग्छ चट्याङ्गको नेटवर्कमा परमाणु बहु-पथ भुक्तानी Bitcoin कारोबार शुल्क र गति असर गर्नेछ? हामीलाई तल टिप्पणीमा थाहा.
अमेरिकी कांग्रेसियों: खानी taxed गर्नुपर्छ
th प्रतिनिधि ...
विकासकर्तालाई को blockchain Dogecoin पहिलो कट्टर घोषणा
राज्य अनुसार ...
अघिल्लो पोस्ट:सबै Miners लागत कमी Bitcoin बच्नेछन्
अर्को पोस्ट:Facebook मा गुप्त विज्ञापन मा प्रतिबन्ध उद्योग कसरी मदत गर्नेछ
अप्रिल 24, 2018 मा 6:48 AM